Turkish Mediterranean Coast | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
Nangalatra lokomototra ao amin'ny Mersin
Nisy tranonjaza iray niforitra tao Mersin nangalatra. Nahatratra azy ny polisy. Araka ny vaovao azo, ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) olom-pirenena iray nividy ny loha masiny fomba malefaka scrapped, mitarika ho simba ny toerana mba ho korontam mpivarotra [More ...]
Torkia Logistics Master Plan sy Logistics Foibe; Logistics Ireo faritra izay ataon'ny mpandraharaha maro ny hetsika rehetra mifandraika amin'ny fitateram-pirenena sy iraisam-pirenena, lozika ary fizarana entana amin'ny foibe. Ny fitsipiky ny toerana sy ny fitsipiky ny foibem-pokontany ivotoerana [More ...]
Ny tapakila tapakila Lakes Express: ny andalana Isparta- Izmir (Basmane) dia tanterahina isan'andro, ny lakes Express, 262 ny zakan'ny mpandeha 4 dia misy ny kara-tsarety 25. Ny sidina Isparta Izmir Express dia nanomboka tamin'ny Oktobra 2019 XNUMX Lakes Express, Mediterane ary Aegean [More ...]
Ny vidin'ny tapakila sy lalan-tsarintany Adana Metro: Toeram-pivarotana iray izay ahitana ny hekitara 150, ao anatin'izany ny trano fitantanana foibe, atrikasa fikojakojana ary trano sy fitaovana hafa mpanampy, 3.521 km Tunnel Open-Close, 5.332 [More ...]
Nakatona ny vavahadin'ny fahafatesana any amin'ny Distrikan'i Ceyhan ao Adana; Ceyhan distrikan'i Adana tamin'ny herinandro lasa, izay mpilalao baolina kitra amam-boninahitra iray sy ilay vehivavy maty nodiavina namakivaky ny lalamby dia nahafantatra fa ilay vehivavy. Mpilalao baolina amboara iray ary am-pandehanana any amin'ny distrikan'i Ceyhan ao Adana tamin'ny herinandro lasa teo [More ...]
Ny kaominin'i Mersin Metropolitan dia nanomboka niasa tamin'ny Mersin Landscape Master Plan izay voalohany amin'ny tantaran'ny tanàna. Nanomboka teo ambany fitarihan'ny Ben'ny tanànan'i Mersin Metropolitan Vahap Seçer ny asa ary nomanina amin'ny alàlan'ny fijerena ny dinam-paritany an-tanàn-dehibe. Nisafidy ny ben'ny tanàna Metropolitan [More ...]
Araka ny Metro City ao Torkia 2019 Ora!; Metro miasa ora indrindra fitaovam-pitaterana nisafidy ao Torkia dia ho fanadihadiana bebe. Ny fiara fitateram-pitaterana, izay mitondra olona mihoatra ny valo tapitrisa isan'andro [More ...]
Adana Mersin fandaharam-potoanan'ny lamasinina sy ny tapakila tapakila 2019: Adana no lalamby lalantsara fahita indrindra eo anelanelan'ny Mersin sy Railway Mersin. Fotoana fitsangatsanganana dia mitaky minitra 45. Ny vanin-taona mafana sy ny ririnina tsy mahatsapa ny Expeditions Adana Mersin maraina 6: 00 [More ...]
Fandaharana fandoavam-bola amin'ny ANTBIS sy famindrana mpikambana
Fandaharana fandoavam-bola amin'ny ANTBİS sy fifandraisan'ny mpikambana: Antalya Munisipaly Metropolitan, mba hampiroborobo ny fampiasana bisikileta ho fitaovana fitaterana ankoatry ny tanjona fialamboly sy fanatanjahantena; ANTBIS ny fanaparitahana ny Bisiklet Smart System System momba ny bisikileta inde manerana an'i Antalya, [More ...]
Fikarohana momba ny olan'ny fitaterana ao Alanya
Fikarohana momba ny olan'ny fitaterana any Alanya; Antalya Metropolitan Munisipaly, mba hahafahana mamaha ny serivisy mora kokoa ary ao anatin'ny fotoana fohy dia anaovana fisafoana sy fivoriana ataon'ilay olom-pirenena. Amin'izany toe-javatra izany, ny komisiona amin'ny UKOME [More ...]
Antalya 3. Fiaraha-miasa amin'ny dingan'asa amin'ny rafi-pandaharana fiaran-dalamby
Antalya 3. Fiaraha-miasa amin'ny asa fanalahidy amin'ny tetik'asa rafi-pandrefesana; Antalya Metropolitan kaominina 3. Mitohy ny asa tavela hamoa ao amin'ny Project System Etap Rail. Ny tsangantsanganan'ny sisintany afovoany sy ny asan'ny fotodrafitrasa Otogar-Meltem ny tsipika dia vita [More ...]
Isparta Munisipaly sy TCDD Protocol dia hampihena ny fivezivezena ao an-tanàna
Miaraka amin'ny Protocol eo anelanelan'ny Kaominina Isparta sy TCDD, dia hihena ny fifamoivoizana ao an-tanàna; Fampivoarana manan-danja ho an'ny gara fitateram-bahoaka izay nangatahan'ny zaridaina nasionaly Şükrü Başdeğirmen nandritra ny fitsidihan'ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan mankany Isparta [More ...]
Fandinihana ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny Alanya
Fandalinana fifamoivoizana an-tsokosoko any Alanya; Ny ekipan'ny mpiasan'ny sampana Serasera Alanya Service Alanya dia nametraka sonia 102 tondrozotra amin'ny marika samihafa any amin'ny manodidina an'i 700 any Alanya. Antalya Metropolitan munisipalin'ny Alanya Service Unit Sign Team, tanàna, boulevard, arabe, [More ...]
Mpikambana TCDD nametra-pialana tao 2009
Hetsika famandrihana olona ao amin'ny TCDD ao amin'ny 2009 Tapaka; Nanapakevitra ny Fitsarana momba ny lalàmpanorenana fa ny hetsika famaizana izay napetraky ny mpiasan'ny TCDD izay miala amin'ny asany ao amin'ny 2009 ankoatry ny famoahana ny asany dia tsy fanitsakitsahana ny zony. Ao amin'ny 2009, [More ...]
Vehivavy mitazona lamasinina fikotranana ray raha nihaino ny mozika izy dia maty
Teo am-pihainoana mozika dia namoy ny ainy ilay vehivavy tratry ny fiaran-dalamby; Nilgün Çolak (38), izay voalaza fa nandeha tamin'ny fihainoana mozika tamin'ny headphone tao amin'ny distrikan'i Ceyhan ao Adana, dia tsy nahatsikaritra ny fiaran-dalamby lamasinina ary maty noho ny lozam-pifamoivoizana. Loza any Adana [More ...]
CHP Göker nanontany hoe: 'Ny lalamby haingam-pandeha no handalo ao Burdur?'
Nanontany i CHP Göker hoe: 'Burdur ny hafainganam-pandeha avo lenta?'; Ny solombavambahoakan'i CHP Burdur Mehmet Göker Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa dia nanome fanontaniana voasoratra momba ny fiaran-dalamby haingam-pandeha. Avo izay heverina fa hamakivaky an'i Burdur [More ...]
Mikasika ny fitateram-bahoaka any Mersin ny tànan'ny vehivavy
Ny ben'ny tanànan'ny Mersin Metropolitan Vahap Seçer dia nanambara fa hanao fanavakavahana tsara amin'ny vehivavy amin'ny fotoana rehetra izy. Ny vehivavy dia manana fitenenana amin'ny fitateram-bahoaka any Mersin. Ny ben'ny tanàna, izay manome ny vaovao tsara fa ny fiarabe fiara dia hitarina vao haingana ihany [More ...]